हेर्नुहोस् ! यी तीन राशी भएका व्यक्ति जसको हुन्छ अकालमै मृत्यु ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख ०३, २०७६१०:५१
काठमाडौँ । जन्मपछि मृत्यु निश्चित हुन्छ । तर कोही ढिलो चाढो भन्ने मात्रै हो । मृत्यु कसैको निश्चित हुँदैन् कुनै पनि प्राणीको जुन सुकै बेला पनि मृत्यु हुन सक्छ । त्यसकारण यो लोकमा रहेका हरेक प्राणीको जन्म मृत्यु भनेको भगवान बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन् ।
अक्सर कतिपय मानिसको भने ज्योतिष शास्त्रअनुसार जन्मकुण्डली हेरेर पनि मृत्युको समय निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर यस्तो कुरा सबैमा सम्भव हुँदैन् । यद्यपी ज्योतिष शास्त्र अनुसार १२ राशी मध्ये तीन राशी हुने व्यक्तिको मृत्यु अकालमा हुने बताइएको छ । हेरौँ कुन कुन हुन् त ती तीन राशी
वृष राशी : अकालमै मृत्यु हुने तीन राशी मध्ये वृष राशी पनि रहेको छ । यो राशी हुने व्यक्तिको जीवनमा ग्रहको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कुम्भ राशी : यो राशी भएका व्यक्तिले स्वास्थ्यमा निकै ख्याल गर्नु पर्नेछ । समय समयमा स्वास्थय सम्बन्धी विभिन्न समस्या आइपर्ने भएकाले डाक्टरसाग उचित सल्लाह लिनु जरुरी रहेको छ । यस राशी भएका व्यक्तिमा ग्रहको नकारात्मक दोष रहेकाले यस्ता दोषलाई निवारण गर्नको लागि विभिन्न उपाय अपनाउन जरुरी छ ।
कर्कट राशी : यो राशी भएका व्यक्तिले हरेक प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुम्भ राशी भएका व्यक्तिमा अभिक मात्रामा समस्याहरु आइरहने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेछ ।